Zvakanakira Muti weLaburnum
Tabex inogadzirwa zvakasikwa pahwaro hweCytisine Inosanganisirwa mumuti Cytisus laburnum (Golden Rain acacia)
Cytisine uye iyo Laburnum Muti
Cytisine, chinodhonza chirimwa icho chinowanzoshandiswa kumabvazuva kweEurope kubatsira nezvishuwo zvetsika zvine chekuita nekuputa zvinoita sezviri nani pabasa kupfuura chikakananda chinotsiva zvigamba nematadza.
Kwete yekusavhiringidzwa neDNA yekuvaka cytosine, cytisine chinhu alkaloid yakatorwa kubva ku laburnum kana yegoridhe mvura muti (Laburnum anagyroides), iyo inokura munzvimbo dzinodziya munzvimbo dzakasiyana dzeEurope. Cytisine inoshanda nekuvhara kugona kweicotine kune ekugamuchira mafaro europi.
Kunge nicotine, cytisine ine chepfu kana ikamedzwa muhuwandu hwakawanda (sekungofanana nechimwe chirimwa chakamisikidzwa) asi yakachengeteka pamadosi mashoma. Cytisine yakagadzirwa muEastern Europe nyika kwemakumi emakore zvikuru Poland neBulgaria uye inoramba ichishandiswa senzvimbo yekumisa kumabvazuva kwenyika dzeEurope sema1960 asi isingazivikanwe kumwe kunhu. Tabex Chiratidzo cheSopharma Pharmaceuticals yakagadzwa muSofia, Bulgaria uyo akaumba Tabex uye akatanga kuiwana kuma70's.
Zvidzidzo zvekiriniki zvinoratidza kuti kurapwa nehurongwa hweTabex® kunotungamira kune vanhu vanorega kuputa mune vanopfuura 57% yevanhu.
Cytisine ine zvimiro zvakafanana nekusvuta asi mune yakaderera chepfu chiyero. Tabex® inoratidzira pakati peakanakisa mhedzisiro kusvika parinhasi rubatsiro rwekurega kusvuta zvakasikwa!
Tabex® inoshivirirwa zvakasarudzika, uye inoshandiswa mune yekurapa fashoni, inobvumidza inononoka maitiro ekurega kusvuta isina makuru maitiro. Hapana makuru mhedzisiro anotaurwa necytisine uye angori manyoro kesi anoratidza kushoma mudumbu kugumbuka kana uchishandiswa mune yakakwira doses.
Tabex inoshanda sei mukati mehuropi hwako? Mashandisiro aungaita Tabex Zvidzidzo zvekuchipatara paTabex